Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica zvinoti zvakatarisira kuvhota musarudzo dzichange dziriko nemusi wechipiri dzekutsvaga mutungamiri mutsva pakati pava Donald Trump ve Republican Party naVa Joe Biden ve Democratic Party.
Pastor Rebecca Makayi vekereke yePraise Covenant International Church, avo vari kuMinnesota, vanoti vari kukurudzira vatendi kuti vabude vachinovhota nehuwandu hwavo svondo rinouya. Vanoti vakatanga kunamatira sarudzo idzi kare uye vane tarisiro yekuti Mwari vachaita kuda kwavo.
Vanotiwo pane zvizhinji zvinokwanisa kudzidzwa ne Zimbabwe kubva pane zviri kuitika muAmerica pamusoro pemafambisirwo esarudzo nekuremekedzana kwevanokwikwidza.
"Tinowona kuti vanhu vanobvumidzwa kutsvaga rutsigiro vakatambanuka muno muAmerica pasina vanotyorerwa kodzero dzavo uye vemapato vanoremekedza bumbiro remutemo renyika yeAmerica mune zvese zvavanoita. Dai izvi zvikaitwawo muZimbabwe,"Pastor Makayi vaudza Marvellous Mhlanga-Nyahuye Studio7.
Hurukuro naPastor Rebecca Makayi